I-BWC089B -I-OMG yeeyure ezili-16 zeLightweight Police Body Worn Camera (I-Wide Angle 170-Degree) -Izisombululo ze-OMG
I-BWC089B -I-OMG yeeyure ezili-16 zeLightweight yamaPolisa oMzimba weKhamera eyiWorn (i-Wide Angle 170-Degree)
- 40MP ukurekhoda.
Uyilo lwe-Smart, i-128g kuphela.
-Yakhelwe kwi-4000mAH ibhetri-ukurekhoda iiyure ezili-16.
-Nkxaso yangaphandle yekhamera encinci, i-720P yokwenyani. (ukhetho)
-Nkxaso cima iaudiyo yemowudi yevidiyo, irekhodi lwevidiyo ngaphandle kwesandi, vula, ividiyo ngesandi.
Umsebenzi ofihliweyo wokurekhoda, akukho lizwi kwaye akukho zibane zesalathi xa kusebenza ikhamera.
-Umsebenzi wombono onamandla ebusuku, okwaziyo ukubona ukubonakala kobuso babantu ngokucacileyo ukuya kuthi ga kwi-15M ebumnyameni obupheleleyo.
-Iqhosha elinemibala yeqhosha "lokucima nokucima".
-Ukuyeka isitishi sokutshaja kulula ukutshaja.
-Iividiyo ezibalulekileyo zichaziwe kwaye zitshixiwe.
Isandi kunye ne-alamu ekhanyayo.
-Iqhosha elinye lokurekhoda, ukurekhoda iluphu, umsebenzi wokufumanisa iMotion, ungaphoswa nawuphina umfanekiso wokunyanzeliswa komthetho.
Umsebenzi ofihliweyo wokurekhoda, akukho lizwi lesalathi kunye nezibane xa kusebenza ikhamera.
-Khawuleza phambili kwaye ubuyisele umva 1-128X.
-Ukusebenza kokuphakanyiswa kwabalinganiswa, zonke iividiyo kunye nemifanekiso ziya kudityaniswa nexesha, i-ID yesixhobo, i-ID yamapolisa kunye nolunye ulwazi, azinakho ukuhlelwa okanye ukulungiswa kwakhona, zibonelela ngobungqina obusebenza ngokusemthethweni.
-Ukurekhoda ividiyo kwangaphambili, umsebenzi owandisiweyo wokurekhoda, ungaphoswa nawuphina umfanekiso wokunyanzeliswa komthetho.
-Imisebenzi ephambili, eyile ukurekhodwa kwevidiyo, ukufota-ukurekhoda isandi.
- Dlala iaudiyo, ividiyo kunye nefoto kumdlalo weqonga
-Idatha yevidiyo iya kwahlulwa kwaye igcinwe ngokuzenzekelayo, nganye kwi-5/10/15/20 yemizuzu ukhetho, ukuthintela ukulahleka kwedatha okubangelwa kukusebenza okungalunganga.
- Isandi seVidiyo vula / cima umsebenzi, xa ucima isandi sevidiyo, ividiyo erekhodwayo akukho sandi.
Isitshintshi sokucoca kabini, akukho mbala ubekiweyo emini, ucacile ngexesha lasebusuku.
-Akwazi ukujonga phezulu okanye ukucima idatha yokurekhoda iifayile, ngaphandle kokuba ugunyazisiwe.
-Kunye neklip yokujikeleza ye2pcs.
-Umsebenzi wokulwa nokushukuma, ukuxhasa ukuba uthathe iifoto ezicacileyo.
-Ungangenwa ngamanzi: IP67
-Qhagamshela iPC ngokuthe ngqo, ukhuseleko lwegama eligqithisiweyo.
-Yakhelwe kwi-WIFI (ukhetho)
-Yakhelwe kwi-GPS (ukhetho)
Isombululo seVidiyo: 4K 30P, 3.2K 30P, 2304 * 1296P 30P; 1920 * 1080P 30P, 1280 * 720 60P, 1280 * 720 30P, 848 * 480 30P
I fom yeVidiyo: H.264 MPEG4
evakalayo: Umgangatho ophezulu wokwakha-kwimakrofoni.
Ifomathi yeNtetho: I-AAC2./MP3
UMark waManzi: I-ID yomsebenzisi, ixesha kunye nomhla Isitampu esenziwe kwiVidiyo.
Ikhamela: Ukhetho lwekhamera ye-40Mega ye-pixel kunye nefoto ekhethiweyo (3/5 / 10photos)
Isisombululo sefoto: 4M(2688*1512 16:9), 8M（3226*1814 16:9）, 12M（4838*2722 16:9）,
Shot Shot: Thatha iifoto ngexesha lokurekhoda kwevidiyo
Inqanaba loGcino: Isibonisi sokubonakalayo
ulwimi: IsiNgesi / isiRashiya / isiPolish / isiTshayina
Sondeza ngaphakathi / ngaphandle: 1-128X
Ukubhalwa kweqhosha elinye: inkxaso
Ukuya phambili ngokukhawuleza: inkxaso
Buyela umva: inkxaso
Ukufumanisa ukuhamba: inkxaso
Ushicilelo lweLoop: inkxaso
Ukukhanya kwe-IR: 2 ukukhanya
Isibane esincedayo: Ngesibane esinye esimhlophe, i-alamu yenkxaso
UKUPHONONONGA NGOKUFANELEKILEYO / IVANGELI
Isikrini seLCD: I-2 intshi TFT-LCD High-Isisombululo Umbala wombala
Ukurekhoda i-Angle: I-Angle angama-degrees 170
Umbono ebusuku: Ukufikelela kwi-10 Iimitha ezinokuchongwa kobuso obonakalayo
Isiqwengana: Iqhekeza eliphezulu lomgangatho ohanjiweyo ngee-degrees ezingama-360
udidi: Yakhelwe kwi-4000mAH ibhetri yeLithium
Ixesha lokuhlawula: imizuzu 300
Ukurekhoda okuqhubekayo: Iiyure 16
Isilumkiso sebhetri esezantsi: Isilumkiso seBeep kunye nesilumkiso esisandi
Ukukhuselwa kwephasiwedi: Ukuseta iphasiwedi yomlawuli ukuvumela ukususwa. Umsebenzisi unokujonga kuphela iividiyo kodwa akakwazi ukuyicima.
Ukurekhoda kwangaphambili kunye nePost-rekodi: I-5 ~ 10 imizuzwana yerekhodi / irekhodi lasemva
Ukuqhuma: 3/5/10 Shot kuqhuma umfanekiso uthathe
Inqanaba: 78 mm * 59 mm * 27mm
Ukusebenza kokushisa: -30 ~ 60 degrees Celsius
Lokushisa lokugcina: -30 ~ 55 degrees Celsius
794 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-1 Namhlanje